वर्षेनी सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयवासी सडक निर्माण हुन लाग्दा खुशी - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार वर्षेनी सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयवासी सडक निर्माण हुन लाग्दा खुशी
झलनाथ खनाल रासस
२८ कार्तिक भजनी । कैलालीको भजनी नगरपालिका–१ को भजनी–सुखड सडकखण्ड निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । कालोपत्र भएर पनि ठुल्ठूला खाल्डाखुल्डीका कारण वर्षेनी सास्ती खेप्दै आएका स्थानीयवासी सो सडकखण्डलाई नगरपालिकाले निर्माण गर्न थालेपछि खुशी भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ उक्त सडक निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु एक करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट गत आवमै विनियोजन भए पनि गत आवको असारमा सम्झौता भएका कारण सडक निर्माणको काम हाल आएर शुरु भएको भजनी नगरपालिकाका इञ्जिनीयर भक्तराज जोशीले बताए । असार मसान्तमा सम्झौता भएका कारण सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने भने देखिँदैन, काम शुरु भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले पुस महिनासम्म काम सक्नुपर्नेछ । इञ्जिनीयर जोशीले भने, “वर्षात्को समयमा काम हुन सकेन, त्यसकारण काम ढिलो हुने देखिएको छ ।” भजनी बजारदेखि सुखड सडकखण्डको ९०० मिटर सडक निर्माणको काम केएन कन्स्ट्रक्सन धनगढीले गर्दै आएको छ । पुरानो सडकको चौडाइ तीन मिटर मात्र थियो भने हाल निर्माण हुनलागेको सडकको चौडाइ १० मिटर रहेको कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक निर्देशक खगेन्द्र मौनीले बताए ।
उनले पुरानो सडकलाई उखेलेर नयाँ निर्माण गरिने बताउँदै सडक निर्माणको काम आफूहरूले ४६ दशमलव ५ प्रतिशत बिलोमा गरेको बताए । निर्देशक मौनीले सडकमा खानेपानीको पाइपहरू भएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै नगरपालिकाले जतिसक्दो छिटो खानेपानीको पाइपलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यति नै छिटो काम सम्पन्न हुने बताए ।
“हामीले ग्राभेल हाल्ने काम शुरु गरिसकेका छौँ । खानेपानीको पाइपका कारण कामले गति लिनसकेको छैन”, मौनीले भने, “नगरपालिकाले काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदियो भने र स्थानीयवासीले सहयोग गरे काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।”
स्थानीयवासी अर्जुन खत्रीले बजार क्षेत्रमा सडक साँघुरो र खाल्डाखुल्डी भएकै कारण दैनिक दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएकामा नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा मात्रै भए पनि सडक निर्माणले भजनी बासिन्दालाई सहज हुने बताए । उनले भजनीदेखि सुखडसम्मको सडकको अवस्था नाजुक भए पनि सडक निर्माणमा कुनै निकायको ध्यान नजाँदा जोखिमको यात्रा गर्न स्थानीयवासी बाध्य भएको बताए ।
भजनी–सुखड सडकखण्ड करीब २४ किलोमिटर रहेको छ भने भजनी नगरपालिकाको क्षेत्रमा करीब १४ किलोमिटर पर्दछ । नगरपालिकाले ९०० मिटर सडक निर्माण गरे पनि यसलाई क्रमागतरूपमै भए पनि सडकको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताए । उनले स्थानीय जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार नै नगरपालिकाले काम गर्दै आएको बताउँदै निर्वाचनको समयमा जनतासँंग गरेका बाचाहरू पूरा गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, “हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको सबै नगरवासीको घरसम्म सडक सञ्जाल जोड्नु हो, त्यो संँगसँगै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।” नगरप्रमुख चौधरीले भजनीवासी जनताका लागि नै आफूहरूले काम गरिरहेको बताए ।
अघिल्लो लेखडिभी परेर वडाध्यक्ष अमेरिकामा, वडा कार्यालय नेतृत्वविहीन
अर्को लेखआइएमईको डबल अफरमा शेरचन भए साताैं
खानेपानीमा नक्कली उपभोक्ता समिति खडा, रकम झ्वाम पार्ने योजना !
काँसजरीमा खानेपानी सुविधा, स्थानीयवासी खुशी
खानेपानी लिन धारामा जाँदा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु
लकडाउन मै २६ घरमा खानेपानी
लकडाउनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक एक हजार भत्ता !
सडकमा कालोपत्र थप